Imodeli, ndibuyela kwitalente-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-model, ubuyela kwi talente
Indaleko yetekhnoloji kwindawo yeekhompyuter iyintsokothile, umthetho kaMorey ubonakalise ngokuthembekileyo ukuba ayizukubakhona kwiminyaka emibini ukusebenzisa iWindows 7 ngaphandle kokubonwa njengeyokuqala. I-AutoCAD 2013 sele idlala kwiiforum kwaye asikagqibi ukuhlafuna Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2012, phantse yonke into namhlanje ityala, ilula, ikhona Amaphepha am, kwi-USB, ngeposi okanye nakwifu.
I-Bentley ibonise umxholo I-imodeli iminyaka emibini, xa ndikhumbula ndibona lo mcimbi njengotshaya kakhulu. Kunyaka ophelileyo ndibone into ethile isebenza, kwaye kulo nyaka wesithathu ndonelisekile kukubona inkani elungileyo kwakuloo mbandela wokuba ngaphezulu kweklasikhi sinomgaqo wefilosofi ocingisiswe kakuhle, phantsi kwegama "Masibuyele kwi talente".
Nangona i-Bentley Systems ibonakaliswe ngu-ngokugqithiseleyo- Ubuchule bokuyila, ukuya kuthi ga ngoku ekuphulukaneni nokusebenziseka kwabasebenzisi -u kutshaywa-, inokuhlawulelwa ayinxulunyaniswa neendlela ezimbi zokuthatha abasebenzisi bayo ukusuka kumaza ukuya kumaza, etshintsha rhoqo indlela eqhelekileyo yokusebenza. Sikubonile oku iminyaka, ngokungaguquguqukiyo kwifomathi ye-dgn engatshintshi kwaphela ngenxa yemfuno ye-16 ukuya kuma-32 amasuntswana, ujongano olulawulwa ngumsebenzisi kwaye ngoku umbono we-I-modeli ubonakala uqinisekisa ngakumbi ukuba ifilosofi.
Kwenzeka ntoni ukuba igama elithi "Masibuyele kwi talenteKubonakala ngathi ayihambelani namaxesha ethu. Phantse yonke into yenziwe -si kholelwa-Kodwa uninzi lwezinto ezenziweyo zanamhlanje zijongana nemfuno yethu yokwenza izinto ngokufanelekileyo. Sinobuchwephesha obuphambili kakhulu, kwaye sinokunxibelelana nabantwana bethu kwelinye icala lehlabathi ngonqakrazo olulula skype, sinokuyilandela kwiprojekthi TeamViewer, ncokola nentombi evela kwiselfowuni, njl. Kodwa sinobunzima obukhulu bokugcina ikhompyuter yethu ingenantsholongwane, ukuqhagamshela ngaphandle kwamacingo ngeWindows 7 phantse kube kukutsiba kokholo kwaye siqinisekile ngokupheleleyo ukuba kunyaka olandelayo kunokuba kubaluleke kakhulu.
Oku kwenzeka ngenxa yokuba unxibelelwano lwabathengi kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji ngumtshato obulalayo. Incinci kakhulu into esiyenzayo ngoku ngezixhobo eziphambili esinokuqinisekisa ukuba zizinzile kwiminyaka emi-5 ezayo; Nangona le ikwayinkqubo efanayo kwiminyaka engama-30 eyadlulayo. Sikwazigxeka kakhulu iinkqubo zesiko, silibale ukuba ukuba azikho ephepheni azisokuze zisebenze ngendlela ezenzekelayo, kwaye ngokubanzi siyalibala umxholo kwaye sibuze abo batshaya umbhobho ofanayo nolunye uhlobo lwecuba kwiindawo ezimbini ze-UTM.
Umzobo ongentla ubonakalisa imigaqo emithathu yesindululo sikaBentley sokubuyela kwitalente. Kwakunzima ukuba uGreg aye ecaleni kwifoto, kodwa ekugqibeleni ndenza enye engcolileyo kwiphaneli yokujonga; Kwimo yesikimu ibonisa:
Microstation, itafile yomsebenzi apho kusebenza khona ubuNjineli obahlukeneyo, ubuNjineli boKwakha kunye nezixhobo zoKwakha. Ukuthatha i-dgn elula ukuya kwelinye inqanaba (I-modeli) nangona kunjalo isengumbono kodwa ukuxhotyiswa kwabasebenzisi bezixhobo ezinje ngeMephu yeBentley, iPower Civil, iZityalo eziVulekileyo, okanye nayiphi na into eyenzayo kukongeza iimpawu zealphanumeric kwimodeli.
IProjekthiWise, njengesixhobo soqhagamshelo. Nokuba kwi-USB, kwi-hard drive, kwiselfowuni okanye efini, yindlela eya kusebenza ngayo nayiphi na ingqeqesho.
AssetWise, njengesixhobo solawulo. Oku kutsha nje kodwa kucacisiwe ngokucacileyo, kunye nayo imigaqo idityanisiwe ebuyisela imodeli ebaleni kwakhona, ihlala isikhumbuza ukuba imilo luphawu nje lobuxoki kunye nekhonkco elintsokothileyo lokulingisa iqonga elidadayo Iikhilomitha ezili-15 ukuya elwandle.
Usizi lokuba ukubheja kweBentley kuya kuhlala kubasebenzisi bayo; Ngaphandle kokuba omnye wabazalwana anqwenele ukuba ngumpolitiki okanye abandakanyeke kwinkolo yesisa. Kodwa kuthi kuthi abo bebejonga le ndlela yokucinga, sifumana ukufunda okuxabiseke kakhulu kumacandelo ohlukeneyo obomi; ngoku ndiceba ukushwankathela ezinye zezo zinto kunye nomoya opholileyo waseAmsterdam:
Ndiyifumana into enomdla, ukuhlaziywa koko kuthetha ukuthini ukubuyela kwi talente; ukuba ngaphaya kokusondeza izicombululo ezenziwe ngetekisi etafileni kusinceda siphuphe iindlela ezintsha ukuzisebenzisa Isibane sikaAliddin. Kwaye inyani kukuba italente ikoko sikwenzayo ngezixhobo eziqhelekileyo, jonga ukuba yintonidamnIdonga leHoover Bypass inokusenza sikhohlwe ukuba uyilo lwenziwa ngamathuluzi alula njenge-Microstation, ungakhankanyi i-Expressway Bridge Design kwi-Hybrid AutoCAD / Microstation kaLu Zhuojun.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukucinga ngaphaya. Emva kweminyaka emi-3 ekugqibeleni ndaye ndacacelwa kukucacisa ukuba babethetha ntoni nge-I-modeli, hayi kuba yayingumsi we-astral kodwa kuba yayiphambi kwexesha likaCharlotte ngo-2008.kwaye engavamile- umsebenzi joint benza kunye AutoDesk, bekhangela lezigidi abasebenzisi dwg / dxf fomati, nangona inzuzo kwelinye icala ayikho kisekiyo ukusukela I-ongumzekelo kungenziwa kuphela software Bentley; Abasebenzisi be-AutoCAD abayi kubaleka ukuya kwi-Microstation yokuva igama elithi hypermodel nokuba.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukucinga ngomsebenzisi wokugqibela. Ngubani onokucinga ngexesha lokuba ifayile ye-dgn / dwg ingajongwa kwi-Windows browser okanye kwi-Outlook. Kodwa ngoku kuyinyani, ayinakwenzeka kuphela ukubona i-vector nokuba iGoogle iyakwazi, kodwa nokusondeza, ipani, ukuchukumisa into, jonga iimpawu zayo, ubeko, ukuyijikeleza kwi-3D okanye ukuyenza ibonakale ngokukodwa (yodwa). Kungenxa yokuba, njengoko wayeyazi ngelo xesha, uBentley wayenethemba lokuba ifayile yakhe ye-dgn iyayeka ukuba yifomathi engaziwayo kwihlabathi, kwaye ngenxa yoku wayecinga ngomsebenzisi wokugqibela ogqitha kwibhulorho yabahambi ngeenyawo nokuba akanalo nofifi oluncinci lokuba lubalwa njani. ukucheba ngo-L / 4.
Ukubuyela kwi talente kuthetha ukugxininisa kwinjongo enye. Nangona izicwangciso zinokutshintsha, umsebenzisi kufuneka abone ukuba siya endaweni enye; Njengakwilinge elingaphumelelanga leMicrostation Athene, phantse akukho mntu wayiqaphelayo kwaye ngoku indawo ephuculweyo esinayo evela kwiXM yamkelwe ngabasebenzisi bayo. Kwangokunjalo, unyanzeliso kwimodeli ye-I kufuneka igcinwe nangona umxholo we-BIM ungekathengiswa; kodwa ukuhamba kwedatha ngoku kuvula iingcango zokwazisa umxholo, nangona izakuba phantsi kwelinye igama -Ndiyathanda kwaye ayiyi iBIM, andiyakholwa ngoba imisebenzi yafa-.
Ngexesha elifanelekileyo leeNkqubo zeBentley, ukufunyanwa kwezinto zakutshanje (iiPointools, iRaceway, iAECOSym) kuqinisekisa kuphela ukuba bazimisele ukugcina abasebenzisi babo bekhangela ubuchule obuzinzileyo, beetalente. Umanyano lwangoku neMicrosoft, iAdobe, kunye noGoogle kwixa elizayo ziya kunceda ukwenza ifuthe elikhulu.
Ukuphindaphinda into awayeyithetha kwiminyaka emibini edlulileyo: Bentley ngokusebenzisa I-imodeli Ndandifuna masibe samkele i-dgn njenge-pdf eyaziwayo. Isoftware yakho ayinakufika kwivenkile enkulu, ngaphandle kwebhokisi, kodwa into ebonakala iqinisekile kukuba iziphumo eziveliswe kwimveliso yakho ziya kuba nakho ukubonwa nangubani na olaziyo ilizwe lokwenyani.
Ngaba siya kuba neMicrostation yeMac?
Imigca yeContour nge-AutoCAD - Ukusuka kwidatha yesiKhululo esipheleleyo